ဆော့ဖ်ဝဲ အာတဖက် ဆိုသည်မှာ ဆော့ဖ်ဝဲတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
ⓘ ဆော့ဖ်ဝဲ အာတဖက် ဆိုသည်မှာ ဆော့ဖ်ဝဲတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများမှ ထုတ်လုပ်လိုက်သော ဆော့ဖ်ဝဲတည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာတွင် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိ ..
ⓘ ဆော့ဖ်ဝဲ အာတဖက်
1. အခေါ်အဝေါ် ဖြစ်လာပုံ
အာတဖက် artifact ဆိုသော အသုံးအနှုန်းကို ရှေးဟောင်း သုတေသန Archaeology တွင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြရာ၌၊ တူးဖေါ်ရာမှ ထွက်ရှိလာသော အပိုင်းအစတို့ကို ကြည့်ရှု၍ ၎င်းတို့၏ ပြုလုပ်ခဲ့သောကာလ၊ ပြုလုပ်ခဲ့သော လူ့​အဖွဲ့​အစည်း​တို့ကို သရုပ်ဖေါ် မှန်းဆနိုင်ပေသည်။ ထို့အတူပင် ဆော့ဖ်ဝဲ အာတဖက်များကိုကြည့်ကာ အခြားဆော့ဖ်ဝဲ တည်ဆောက်သူများက အဆိုပါ ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုကို တည်ဆောက်စဉ်ကာလ၌ မည်သို့တွေးတောကြံစီကာ မည်သို့သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မည်သို့တည်ဆောက်ခဲ့သည်ကို ပြန်လည်မြင်ကြည့်နိုင်သည်။ ၎င်းမှတစ်ဆင့် အဆိုပါ ဆော့ဖ်ဝဲကို ပြန်လည်ဖန်တီးခြင်း၊ အမှားပြင်ဆင်ခြင်း၊ တိုးတက်အောင်ပြုမူခြင်းများကို လုပ်ကိုင်သွားနိုင်သည်။ ဖြစ်ပြီးခဲ့သောသမိုင်းကြောင်း past histories ဆိုသော သဘောတရားကို အသားပေးညွှန်ပြလိုသည့်အတွက် အာတဖက်artifactဟူသော စကားကို တွင်ကျယ်စွာ သုံးစွဲလာကြခြင်းဖြစ်သည်။
2. အာတဖက် နမူနာများ
ဆော့ဖ်ဝဲတည်ဆောက်ရေးနှင့် စပ်ဆိုင်သော ဆွေးနွေးပွဲများ၏ မှတ်တမ်းများ
ဆော့စ်ကုဒ် source code
ဆော့ဖ်ဝဲတည်ဆောက်ရေး အထောက်အပံ့ မှတ်တမ်းများနှင့် စာရွက်စာတမ်းများ documentation
ဆော့ဖ်ဝဲတည်ဆောက်ရေးနှင့် စပ်ဆိုင်သော ပုံများနှင့် မှတ်တမ်းများ ဥပမာ၊ ယူအဲမ်အယ်လ် UML ဆိုင်ရာပုံများ၊ မိုင်းဒ်မက်ပ်များ Mind maps၊ စီမံကိန်းစာတမ်းများ project documents)
ပက်ကေ့ချ်များ packages - ဆက်နွယ်နေသော ပရိုဂရမ်များနှင့် လိုင်ဘရီများကို ပေါင်းထုပ်ထားသော အရာ
ဆော့ဖ်ဝဲသုံး၍ ထုတ်လုပ်လိုက်သော မှတ်တမ်းများ generated documentation
ဆော့စ်ကုဒ်မှတစ်ဆင့် ဖန်တီးလိုက်သော အရာများ သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲထုတ်ကုန် software outputs
ပရိုဂရမ်များ progams သို့မဟုတ် လိုင်ဘရီများlibraries
စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ပလန်planနှင့် အထောက်အပံ့ မှတ်တမ်းစာတမ်းများdocumentation
ဆော့ဖ်ဝဲထုတ်ကုန်များပြုလုပ်ရာတွင် လိုအပ်သော အခြားမှီခိုပစ္စည်းများ dependencies
စစ်ဆေးခြင်းအထောက်အပံ့ ဒေတာများ test data
ဆော့ဖ်ဝဲထုတ်ကုန်များ မှန်ကန်ကြောင်း၊ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း အလုပ်လုပ်ကြောင်းကို စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ အာတဖက်များ
ပရိုဂရမ်များနှင့် စကရစ်များ scripts
3. အာတဖက်များ၏ အသုံးဝင်ပုံ
ဆော့ဖ်ဝဲတည်ဆောက်သူအဖွဲ့တစ်ခုမှ ရှေးမှထုတ်လုပ်ထားသော ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလုပ်ဆောင်ရည်အသစ်များ new featuresကို ထပ်ထည့်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ ရှေးတည်ဆောက်သူအဖွဲ့မှ မည်သည့်အာတဖက်များကို စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းထားခဲ့သည် ဟူသည့်အချက်သည် အဆိုပါလုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ်ရန် လွယ်ကူမှုနှင့် အောင်မြင်နိုင်မှုတို့အပေါ် များစွာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသဖြင့်၊ အာတဖက်များကို ဆော့ဖ်ဝဲတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု၏ ကျောရိုးဟု ဆိုနိုင်သည်။
၎င်းအပြင် ယခုကာလ၌ ဆော့ဖ်ဝဲထုတ်ကုန်များ output binaries ကို လျင်မြန်စွာ အသုံးပြုသူဆီသို့ ဖြန့်ဝေရာတွင် ဆော့ဖ်ဝဲပြဿနာများ issues အမှားများ errorsမှာ မကြာခဏ ပါဝင်လာတတ်သဖြင့် ၎င်းတို့ကို ဖြေရှင်းသည့် ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်းအသစ်ကိုလည်း ထပ်ဆင့်ထုတ်လုပ်ကြရသည်။ ဤအခြေအနေတွင် ၎င်းပြဿနာများနှင့် အမှားများကို မည်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်းတွင်ရှိသဖြင့် မည်သည့်ဗားရှင်းဖြင့် ဖြေရှင်းထားသည်ဆိုသောအချက်များ သိရှိရန် အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထိုကြောင့် ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်းများအားလုံးကို ၎င်းဗားရှင်းတစ်ခုစီ၏ ထုတ်လုပ်ခြင်းမှတ်တမ်း release noteစသော မက်တာဒေတာများ အနေဖြင့် ပေါင်းစည်းကာ အာတဖက်များအနေဖြင့် သိမ်းဆည်းလေ့ရှိကြသည်။
ထိုကြောင့်လည်း ယခုအခါ ဆော့ဖ်ဝဲတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းတွင် အာတဖက်များ ဖန်တီးခြင်းသာမက အနာဂါတ်အတွက် ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုပါ အထူးဦးစားပေး လုပ်ဆောင်လာကြသည်။
Wikipedia: ဆော့ဖ်ဝဲ အာတဖက်